Eziningi ze-GIS - Geofumadas
Okubonakalayo kungenye indlela yokonga ye-GIS
2014 - Ukubikezela okufushane komongo we-Geo
Isikhathi sesifikile sokuvala leli khasi, futhi njengoba kwenzeka ngokwesiko lethu thina esivala imijikelezo yaminyaka yonke, ngiyeka imigqa embalwa yalokho ebesingakulindela ngo-2014. Sizokhuluma ngokuhamba kwesikhathi kodwa namhlanje, okuwunyaka wokugcina: Ngokungafani nezinye izayensi , kokwethu, ukuthambekela kuchazwa ngombuthano ...
Autodesk Bentley Systems cadastre ESRI egeomates yami QGIS SuperGIS
I-AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, I-GvSIG, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, SuperGIS, uDig, eziningana
I-GIS Manifold, okuthile okwengeziwe ngezakhiwo
Esikhathini esithile esedlule ngikhulume ku-athikili mayelana nokuthi ungazenza kanjani izethulo zokuphrinta usebenzisa i-Manifold GIS. Ngaleso sikhathi senze ukuhleleka okuyisisekelo, kulokhu ngifuna ukukhombisa okuxakile. Lesi yisibonelo semephu yokukhiqiza yezolimo; njengoba imephu enkulu ukusetshenziswa kwamanje kusuka esithombeni ...
Uhlelo lwe-Geographic Information lisebenzisa i-GIS eninginingi
Lo ngomunye wale mikhiqizo okujabulisa ukuwukhuphula, nokuthi emoyeni abakhelwe wona sebetholakalela umphakathi. Yimanuwali echaza ukuthi ingasetshenziswa kanjani i-Geographic Information System kamasipala kusetshenziswa i-Manifold GIS. Izinhlobo ezihleliwe zale mikhiqizo ...
Ukufundisa CAD / GIS, GIS ezininginingi
I-Google Earth; ukusekelwa okubonwayo kwabadwebi bezithombe
I-Google Earth, ngaphandle kokuba ithuluzi lokuzijabulisa lomphakathi jikelele, ibuye yaba usizo olubonakalayo lokudwetshwa kwamabalazwe, kokubili ukukhombisa imiphumela nokuhlola ukuthi umsebenzi owenziwayo uyahambisana yini; ongakusho njengethuluzi lokufundisa ngezigaba zejografi noma ze-geodesy. Kulokhu ngi ...
Google Earth KML GIS ezininginingi
Cartografia, Ukufundisa CAD / GIS, -Google Earth / Amamephu, GIS ezininginingi
Decidiéndonos ngu MapServer
Ngisebenzise ingxoxo yakamuva nesikhungo seCadastral ebesifuna ukushicilela amamephu aso, lapha ngifingqa izinto ezibaluleke kakhulu ukubuyisa ukutakulwa kwendaba emphakathini. Mhlawumbe ngaleso sikhathi kuzosiza umuntu ofuna ukuthatha isinqumo noma acele usizo lwe-geofumada. Kungani iMephuServer Isimo bekungumuntu, obe ...
Autodesk Bentley Systems Blog DGN Google Earth I-GvSIG OS GIS ezininginingi mapserver egeomates yami
cadastre, Geospatial - GIS, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, qgis
AmaGages eklasini lami le-ArcGIS
Ngaphambi kokuba ngibatshele ukuthi ngangizothuthukisa ukuqeqeshwa ekusetshenzisweni kwe-ArcGIS 9.3, ngesimo esiphakathi kakhulu ngenxa yebanga, isikhathi sami esincane nemisebenzi yabafundi. Manje ngikushiyela iziphetho ezithile: Endleleni: ngifisa sengathi konke ngabe kulula kangaka. Uma bekunganikeza ukuqeqeshwa, fundisa ngesibonelo silethe ...
DGN KML GIS ezininginingi
ArcGIS-ESRI, GIS ezininginingi, travel
Baphi abasebenzisi abaningi be-GIS?
Esikhathini esedlule, umphathi wezobuchwepheshe waseDashi wayevame ukusho lokhu kimi: “Ngokwethembeka, kuyangimangaza okushiwo yikhasi le-Manifold. Okwenzekayo ngukuthi angikaze ngikubone kusebenza emshinini ”Kuleli sonto, uPatrick Webber - ovela kwaSpatial Knowledge- wenze isitatimende esingenandaba nakanjani esisenze sathuthumela ...
Bentley Systems ESRI GIS ezininginingi egeomates yami
Ukuqhathaniswa kwe-CAD / GIS ye-boot
Lokhu kungukuzivocavoca ngaphansi kwezimo ezifanayo, ukukala isikhathi esisithathayo ukuqala uhlelo kusuka ngokuchofoza kusithonjana kuze kube manje lisebenza. Ngezinhloso zokuqhathanisa, ngisebenzise eyodwa eqala ngesikhathi esifushane, bese ngikhombisa (okuyindilinga) izikhathi ezihlobene nayo. Angazi…
Autodesk Bentley Systems Google Earth I-GvSIG OS GIS ezininginingi
ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, qgis
I-CAD, i-GIS, noma kokubili?
… Ukuthengisa amakhono okwenziwa yisoftware yamahhala kunzima ukwedlula ukukholisa isikhulu ukuthi senze ubugebengu (ubugebengu), ngakho-ke akwenzi isoftware ebizayo. Muva nje iBentley yethule umkhankaso wokukhuthaza iBentley Map, isebenzisa njengengxabano yokuthi akudingekile ukuthi icabange ngokuhlukile uma zombili ...
I-ArcView Autodesk Bentley Systems 3D civil ESRI Google Earth I-GvSIG OS GIS ezininginingi
ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Geospatial - GIS, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley
I-Geophysics: Izibikezelo ze-2010: I-GIS Software
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ekushiseni kwekhefi de palo elenziwa ngumamezala wami, besenza imibono ethile mayelana nemikhuba ebekelwe u-2010 endaweni ye-Intanethi. Endabeni yemvelo ye-geospatial, isimo simile (hhayi ukusho ukuthi siyisicefe), okuningi kulokhu sekushiwo esikhathini esiphakathi ...
Autodesk Bentley Systems 3D civil DGN DWG ESRI Google Earth utshani I-GvSIG OS KML GIS ezininginingi egeomates yami
ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, egeomates yami, qgis, uDig
Hlanganisa ibalazwe ngetafula le-Excel
Ngifuna ukuhlobanisa itafula le-Excel nemephu ngefomethi ye-shp. Itafula lizoguqulwa, ngakho-ke angifuni ukuliguqulela kufomethi ye-dbf, noma ukulibeka ngaphakathi kwe-geodatabase. Ukuzivocavoca okuhle ukubulala ukuzilibazisa kwaleliholide futhi ngendlela ubheke i-ArcGIS 9.3 evela ku-Acer Aspire ...
I-Acer Aspire GIS ezininginingi shp
ArcGIS-ESRI, GIS ezininginingi
Izinga lezinga nge-GIS ebonakalayo
Ukuhlola okwenziwa yi-Manifold GIS ngamamodeli wedijithali, ngithola ukuthi ithoyizi lenza okungaphezu kwalokho esikubonile kuze kube manje ngokuphathwa kwendawo okulula. Ngizosebenzisa njengesibonelo imodeli esiyidalile ekusebenziseni imigwaqo nge-Civil 3D. Ukungenisa imodeli yedijithali Kule Nqwaba imbongolo enamandla, ...
Autodesk ESRI GIS ezininginingi
GIS ezininginingi, topografia
Ukuqhathaniswa kwesofthiwe ye-GIS yokuhlola
Ngubani ongafuni ukuba netafula eliqhathanisa izinhlobo ezahlukahlukene zesoftware ye-GIS nokusebenza kokuhlola ukuze kuthathwe isinqumo ngokuthengiwe. Yebo, into enjalo ikhona ePoint of Startning, kufaka phakathi abenzi bokusetshenziswa okudumile njenge-AutoDesk, i-ESRI, iMapinfo, i-Intergraph, kanye nabakhiqizi bemishini efana neTopcom, Leica kanye ne ...
I-ArcView Autodesk 3D civil ESRI GPS Amamagazini GIS ezininginingi
ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, GPS / Izinsiza kusebenza, GIS ezininginingi, topografia
Ngakanani isofthiwe efanelekile kule blog?
Bengilokhu ngibhala ngezihloko zobuchwepheshe obuhlanya isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili, imvamisa isoftware nokusetshenziswa kwayo. Namuhla ngifuna ukuthatha ithuba lokuhlaziya ukuthi kusho ukuthini ukukhuluma ngesoftware, ngethemba lokwakha umbono, ukugqamisa ubuhle nokuthi baphendula kanjani emalini engenayo yezomnotho nakumagama okukhiqiza omgwaqo e ...
Blog Google Earth I-GvSIG OS GIS ezininginingi
ArchiCAD, I-AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG, IntelliCAD, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, I-Virtual Earth
Nakhu ukuthi isenzo samathuluzi e-GIS sibizwa kanjani ukuqeda ukungahambisani kwe-vector kuzinkambiso ezamukelwa kakhulu kutopology yendawo. Ithuluzi ngalinye lizisebenzise ngendlela yalo, ake sibheke udaba lweBentley Map neManifold GIS. I-Microstation Geographics Microstation ifaka amathuluzi amabili afanayo, elilodwa elicushiwe ...
Bentley Systems GIS ezininginingi
GIS ezininginingi, Microstation-Bentley
Izixazululo eziyisisekelo, ibhizinisi elihle
Kukhona njalo okuthile amathuluzi ezinkampani ezinkulu angakwenzi kahle kakhulu, kulokhu asebenzisa amathuba amancane ukwenza izixazululo ezihlangabezana nezidingo zamakhasimende, ngokuvamile ayeyizo. Uma kuyibhizinisi elihle noma cha, imodeli iyathakazelisa, imvamisa iya ezingqungqutheleni zaminyaka yonke ukukhuthaza imikhiqizo noma izinsizakalo zabo; inkumbulo…
I-ArcView Bentley Systems ESRI GIS ezininginingi
Innovations, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, egeomates yami
Ubani owahambisa ushizi wami?
Ngithanda kakhulu i-Geoinformatics, ngaphandle kokuba umagazini onambitheka omuhle ekuhlelweni, okuqukethwe kuhle kakhulu ezindabeni ze-geospatial. Namuhla kumenyezelwe inguqulo ka-Ephreli, lapho ngithathe khona imibhalo ethile egqanyiswe ngombala obomvu ukuze ikushukumisele ekufundeni okumnandi. Ezinguqulweni ezedlule ngenze isibuyekezo, namhlanje ngi…
Autodesk ESRI Google Earth utshani I-GvSIG OS Amamagazini GIS ezininginingi QGIS
Geospatial - GIS, I-GvSIG, IntelliCAD, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, egeomates yami, qgis
Xhuma Okubonakalayo nge-Map Street Street
Esikhathini esedlule bengikutshela ukuthi iManifold ingaxhuma ku-Google, Yahoo naku-Virtual Earth. Manje isixhumi sokuxhuma ku-Open Street Maps (OSM) sesiphumile, esakhiwe ngendlela ku-C # ngumsebenzisi wesithangami obizwa ngeJkelly. Lezi zindaba zivele kuleli sonto esithangamini seManifold, lapho ...
Google Earth GIS ezininginingi
-Google Earth / Amamephu, GIS ezininginingi, I-Virtual Earth
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 6 ikhasi elilandelayo
Inkambo - Sketchup Modeling
ISketchup Modeling AulaGEO iveza inkambo yokumodela ye-3D ngeSketchup, iyithuluzi lokucabanga wonke amafomu okwakhiwa ...